Injini ye-injini yenze njani i-traffic?
Kwihlabathi lokuthengisa idijithali langoku, kukho iindlela ezininzi ukuba abanini beewebhusayithi banokukhangela i-traffic kwimithombo yabo yewebhu. Ngaphandle kokungathandabuzeki, siyahlukana. Asinakukhanga nje kuphela i-organic (search) yendlela, kodwa ihlawulwa, intlalontle kunye nokuthunyelwa. Yonke le mithombo yezothutho inokuphucula i-rankings yakho yewebsite. Nangona kunjalo, i-organic (yophando) injini yendlela ithatha inkcazo ebonakalayo ye-website yezithuthi njengoko yinto efanelekileyo kakhulu kwaye iguqulelwe - steam ejector system. I-traffic Organic iqhuba ngaphezulu kwe-50% yazo zonke iindwendwe kwimithombo ye-intanethi ye-e-commerce kunye neeblogi. Yingakho umsebenzi wethu oyintloko kukuthabatha iindwendwe ezichaphazelekayo ezivela kwi-search kunye nokuziguqula kubaxhasi bethu abahlawula rhoqo. Ewe, kulula ukuthenga izithuthi ngaphandle kokufumana inzuzo. Nangona kunjalo, abasebenzisi banokuthembela ngakumbi kwiiwebhusayithi ezibekwe kwi-TOP yosesho lwezinto eziphilayo. Ngaphezu koko, izithuthi ezijoliswe kuzo zijoliswe ngakumbi kunokuba zihlawulwe kwaye zinexesha elide. Kule nqaku, siza kuxubusha ngoluphi uhlobo esinokuqala ukufumana ukuhamba kwinqwelo kwiinjongo zokutshintsha ngokwemvelo.
Ziziphi izizathu zokufumana i-injini yokukhangela injini ye-organic?
Inani elikhulu lenzuzo ekufumaneni abasebenzisi liza kwisiza sakho kwimiphumo yosesho. Kuthetha ukuba bonke abantu abafake kwibhokisi lokukhangela ye-Google imibuzo yokukhangela ulwazi kunye nokuthengiselana bafumana iziphumo zophando lwe-organic. Ukuba umxholo wakho wewebhu unxulumana nabasebenzisi abaphakathi, banokuthi bahlale kwi-site yakho kwaye baguqulwe kubaxhasi okanye abathengi bakho. Uphando lwe-Organic luye luncedo ekubhubiseni njengoko abasebenzisi baya kubona ezininzi iintengiso ezisekelwe kumbuzo wabo. Ngoko, kunokuba luncedo rhoqo ukufumana isithuthi kwi-search engokwemvelo xa kuvela ekuveleni imali engenayo kwiintengiso kunye neenkqubo ezidibeneyo. Enye enye inzuzo yokuvelisa i-traffic yendalo kukuba unokunciphisa izinga lokuhlawula kwaye uphucule amava omsebenzisi kwisayithi lakho.
Amasu osebenzayo ukwandisa inzululwazi yerhwebo
Makhe sixoxe ngamanye amacandelo ancedo anokukunceda ukuba uphucule iindawo zakho zeewebhusayithi, pha kamisa i-intla-rate rate kwaye ufumane umgangatho ogqithisiweyo.
I-SEO yinkqubo eninzi yokwenza ubuchule injongo eyona nto kukulungiselela ukwandisa i-website ngokwemigangatho yerinjini yokukhangela. Njengoko iinjongo zophando ezifana ne-Google zibeka phambili phambili ngamava omsebenzisi kwindawo ethile ye-intanethi, kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukudala i-website enobungane kunye neyobuchule yokuhamba. Ngaphezulu, indawo yakho kufuneka ibe ngokufanelekileyo malunga nombuzo womsebenzisi. Kukho iintlobo ezimbini zephepha le-SEO-off-page. Kwiphepha elisezantsi liyakukhokelwa ngokupheleleyo nguwe kunye neengcali ze-SEO. Ziquka ukubhala okubhaliweyo, uphando lwegama elingundoqo, ukulungiswa kwesakhiwo soqhagamshelwano kunye nokuphuculwa kwe-website yokuhamba. I-SEO ye-Off-page ifom yegunya lesayithi kwimeko yeenjini zokukhangela. Udinga ukudala umkhankaso wokwakha unxibelelwano wokunceda ukuphucula i-rankings yewebsite kwaye wenze imvelaphi yakho yewebhu ibonakale ngakumbi kwi-SERP. Ngaphezu koko, kufuneka uqinisekise ukuba isayithi lakho likhawuleza ngebhodi yokukhangela ukuze ufumane ininzi yesithuthi senjini. Ukulinganisa impumelelo yakho yokuphumelela kwiphulo, ungasebenzisa ithuluzi le-Google Analytics kunye ne-Semalt Web Analyzer.
Ukuthengiswa kokuqukethwe yindlela epheleleyo kunye neyona ndlela elula ukukhangela injini ye-injini yosesho. Isiphambili sokuphumelela ekuveleni umxholo omkhulu kukudala umxholo wabasebenzisi, kungekhona kwiinjini zokukhangela. Inqaku lakho lewebhu kufuneka lifaneleke kulokho abasebenzisi bakho abanokufuna. Kufuneka unike abasebenzisi bakho ingcamango yengcali malunga nomxholo abanomdla ekuphakanyeni igama lakho lesikhundla kunye nokunyaniseka kwabo kwi-brand yakho. Qinisekisa ukuba umxholo wakho uyingqayizivele, ufanelekile kwaye usesikhathini. Ngaphezu koko, faka ezinye iibhloko eziphambili kuyo, ngokukodwa kwiibhloko ukuvumela i-bots search ngokukhawuleza isasaza indawo yakho.